LDRS တို့အတွက် လက်ဆောင် အိုင်ဒီယာ (၅) မျိုး - For her Myanmar
LDRS တို့အတွက် လက်ဆောင် အိုင်ဒီယာ (၅) မျိုး
နှင်းတုန်းကတော့ သူလိုအပ်တာပဲ ပို့ပေးဖြစ်တယ်။ ဒါလေးတွေလည်း ရတာကိုး…
ချစ်ခရီးလမ်းကို အတူတူအရှည်ကြီးလျှောက်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်က Long Distance Relationship (LDRS) (သို့) ခဏတာ နေရပ်ခြားဝေးကွာခြင်းကိုလည်း ကြုံတွေ့ကြရမှာပါပဲ။ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီမှာ အသီးသီးရုန်းကန်ရင်း လွမ်းရင်လည်း ဖန်သားပြင်ကနေတစ်ဆင့်ပဲ အလွမ်းဖြေလို့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သူလိုအပ်တာလေး ဝယ်ပေးရင်လည်း ပျော်မှာဆိုပေမဲ့ ဒီလို စိတ်ကူးဆန်းဆန်းနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေဆို သူလည်း အံ့သြပြီး ပျော်ရ၊ ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့ရတာပေါ့…
ပြန်လာမယ့်ရက်ကို တွက်ပေးတဲ့ ပြက္ခဒိန်
ပြန်လာမယ့် နေ့ရက်တွေကို အတူရေတွက်ရတာက ဘယ်လောက်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ အထူးတလည်ပြောပြနေဖို့ မလိုလောက်တော့ပါဘူးနော့်။ ပိုရိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ လုပ်ပေါ့. ဒီအတိုင်း ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ပြီး တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကို ဆွဲဖြဲရတာထက် ပြန်လာဖို့ ဘယ်နှစ်ရက်ပဲ လိုတော့တယ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးကြည့်ပြီး ဒိတ်တွေကိုလှန်ရတာက ဝေးကွာနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေပြီး ပိုပျော်ရွှင်စေမှာပါတဲ့..
ဝေးကွာနေတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ အဓိကက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလေ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့အနမ်းတွေ၊ အချစ်တွေကို သူ့ရင်ထဲမှာ အမှတ်ရနေစေဖို့အတွက် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီပန်းချီကားလေးက အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
Related Article >>> အလွမ်းတွေလျော့နည်းစေဖို့
ဘယ်လောက်ပဲ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါပေါ အိမ်မှာရှိတဲ့ တိုင်ကပ်နာရီကတော့ မကြည့်မဖြစ်ကြည့်နေရတာပါပဲ။ အဲ့တော့ နာရီလေးကြည့်တိုင်း ကိုယ့်မျက်နှာ (သို့) နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြန်ပြီးမြင်နေစေချင်ရင်တော့ ဒီလိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ နာရီကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။
သူနဲ့ကိုယ်က ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာတုန်းက ဘယ်လိုလေးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဘာလေးကတော့ အမှတ်တရလေး ဖြစ်ခဲ့တယ် စသည်ဖြင့် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို စာလေးနဲ့ ချရေးပြီး ပုလင်းအလွတ် လှလှလေးတစ်လုံးထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ သူဝမ်းနည်းအားငယ်တဲ့အခါ ဖတ်ပါစေ…
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကပ်ထားတဲ့ အမှတ်တရစာအုပ်
လွမ်းတိုင်း ဖုန်းထဲကထုတ်ကြည့်လို့ ရတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်း တခုတ်တရနဲ့ဝင်ကြည့်ဖို့ တော်ရုံတန်ရုံ သတိမရတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူလက်လှမ်းမီရာနေရာမှာ ထားလို့ရမယ့် စာအုပ်လေးထဲမှာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကပ်ပေးပြီး ကိုယ့်ရင်ထဲက စာလေးတွေထည့်ရေးပေးလိုက်ရင် သူ့အတွက်လည်း အလွမ်းဖြေစရာ၊ စိတ်ဖြေစရာနေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်နေမှာပါ။
“အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က ကောင်းကင်တစ်ခုတည်းရဲ့ အောက်မှာ အတူရှိနေကြပါသေးတယ်” (အယ်လဲ့ :P) အဲဒီလိုစိတ်လေးတွေးထားပြီး သူနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုပဲ ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး အတူပြန်နေနိုင်မယ့် နေ့ရက်တွေကိုပဲ ရေတွက်ရင်း သစ္စာရှိရှိစောင့်နေလိုက်ပါ။ သံသယစိတ်မထား သံသယမျက်စိနဲ့မကြည့်ဘဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းချစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်ပါ။ ယောင်းတို့ ချစ်ခရီးလမ်းလေး ဖြောင့်ဖြူးမှာပါ။
နှငျးတုနျးကတော့ သူလိုအပျတာပဲ ပို့ပေးဖွဈတယျ။ ဒါလေးတှလေညျး ရတာကိုး…
ခဈြခရီးလမျးကို အတူတူအရှညျကွီးလြှောကျကွတဲ့ ခဈြသူနှဈယောကျက Long Distance Relationship (LDRS) (သို့) ခဏတာ နရေပျခွားဝေးကှာခွငျးကိုလညျး ကွုံတှကွေ့ရမှာပါပဲ။ တဈယောကျတဈနရောစီမှာ အသီးသီးရုနျးကနျရငျး လှမျးရငျလညျး ဖနျသားပွငျကနတေဈဆငျ့ပဲ အလှမျးဖွလေို့ရတဲ့ အခွအေနမှော အမှတျတရလကျဆောငျလေးတှကေ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ သူလိုအပျတာလေး ဝယျပေးရငျလညျး ပြျောမှာဆိုပမေဲ့ ဒီလို စိတျကူးဆနျးဆနျးနဲ့ လကျဆောငျလေးတှဆေို သူလညျး အံ့သွပွီး ပြျောရ၊ ကိုယျလညျး စိတျခမျြးမွရေ့တာပေါ့…
ပွနျလာမယျ့ရကျကို တှကျပေးတဲ့ ပွက်ခဒိနျ
ပွနျလာမယျ့ နရေ့ကျတှကေို အတူရတှေကျရတာက ဘယျလောကျကွညျနူးဖို့ ကောငျးတယျဆိုတာ အထူးတလညျပွောပွနဖေို့ မလိုလောကျတော့ပါဘူးနေျာ့။ ပိုရိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ နှဈယောကျသားရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့ လုပျပေါ့. ဒီအတိုငျး ပွက်ခဒိနျကို ကွညျ့ပွီး တဈရကျပွီးတဈရကျကို ဆှဲဖွဲရတာထကျ ပွနျလာဖို့ ဘယျနှဈရကျပဲ လိုတော့တယျဆိုပွီး နှဈယောကျသားရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့ ကွညျကွညျနူးနူးကွညျ့ပွီး ဒိတျတှကေိုလှနျရတာက ဝေးကှာနတေဲ့လူနှဈယောကျကို တဈသားတညျးဖွဈစပွေီး ပိုပြျောရှငျစမှောပါတဲ့..
ဝေးကှာနတေဲ့ ခဈြသူနှဈယောကျမှာ အဓိကက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျရဲ့ အထိအတှတှေ့ေ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလေ။ ဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့အနမျးတှေ၊ အခဈြတှကေို သူ့ရငျထဲမှာ အမှတျရနစေဖေို့အတှကျ ကိုယျ့နှုတျခမျးနဲ့ လုပျထားတဲ့ ဒီပနျးခြီကားလေးက အရမျးအထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။
Related Article >>> အလှမျးတှလြေော့နညျးစဖေို့
ဘယျလောကျပဲ လကျကိုငျဖုနျးတှပေေါပေါ အိမျမှာရှိတဲ့ တိုငျကပျနာရီကတော့ မကွညျ့မဖွဈကွညျ့နရေတာပါပဲ။ အဲ့တော့ နာရီလေးကွညျ့တိုငျး ကိုယျ့မကျြနှာ (သို့) နှဈယောကျကွားမှာရှိတဲ့ အမှတျတရတှကေို ပွနျပွီးမွငျနစေခေငျြရငျတော့ ဒီလိုဓာတျပုံလေးနဲ့လုပျထားတဲ့ နာရီကို လကျဆောငျပေးလိုကျပါ။
သူနဲ့ကိုယျက ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာတုနျးက ဘယျလိုလေးဖွဈခဲ့တယျ၊ ဘာလေးကတော့ အမှတျတရလေး ဖွဈခဲ့တယျ စသညျဖွငျ့ ကိုယျတို့နှဈယောကျကွားက ဘယျသူမှ မသိနိုငျတဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို စာလေးနဲ့ ခရြေးပွီး ပုလငျးအလှတျ လှလှလေးတဈလုံးထဲ ထညျ့ပေးလိုကျပါ။ သူဝမျးနညျးအားငယျတဲ့အခါ ဖတျပါစေ…
Related Article >>> အဝေးရောကျအခဈြမြား
ဓာတျပုံလေးတှေ ကပျထားတဲ့ အမှတျတရစာအုပျ
လှမျးတိုငျး ဖုနျးထဲကထုတျကွညျ့လို့ ရတယျဆိုပမေဲ့ တကယျတမျး တခုတျတရနဲ့ဝငျကွညျ့ဖို့ တျောရုံတနျရုံ သတိမရတတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သူလကျလှမျးမီရာနရောမှာ ထားလို့ရမယျ့ စာအုပျလေးထဲမှာ အမှတျတရဓာတျပုံလေးတှကေို ကပျပေးပွီး ကိုယျ့ရငျထဲက စာလေးတှထေညျ့ရေးပေးလိုကျရငျ သူ့အတှကျလညျး အလှမျးဖွစေရာ၊ စိတျဖွစေရာနရောလေးတဈခု ဖွဈနမှောပါ။
“အနညျးဆုံးတော့ ကိုယျတို့နှဈယောကျက ကောငျးကငျတဈခုတညျးရဲ့ အောကျမှာ အတူရှိနကွေပါသေးတယျ” (အယျလဲ့ :P) အဲဒီလိုစိတျလေးတှေးထားပွီး သူနဲ့ဝေးနတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျလုပျစရာရှိတာကိုပဲ ကောငျးကောငျးလုပျပွီး အတူပွနျနနေိုငျမယျ့ နရေ့ကျတှကေိုပဲ ရတှေကျရငျး သစ်စာရှိရှိစောငျ့နလေိုကျပါ။ သံသယစိတျမထား သံသယမကျြစိနဲ့မကွညျ့ဘဲ ကိုယျတဈယောကျတညျးခဈြတယျလို့ ယုံကွညျပွီး အေးအေးဆေးဆေးနလေိုကျပါ။ ယောငျးတို့ ခဈြခရီးလမျးလေး ဖွောငျ့ဖွူးမှာပါ။
Tags: creative, gift, handmade, ideas, LDRS, lipstick, love
Hnin Ei Oo December 10, 2018